अभियान युवा क्लवको आयोजना तथा रिजनल हस्पिटलको प्राविधिक सहयोगमा चापाकोट–७ स्थित श्री सिद्ध बराह उच्च माविको प्राङ्गणमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने भएको छ ।
क्लवले यहि मंसिर ४ गते शनिबार आफ्नो १०औं बार्षिकोत्सवको अवसर पारेर मेडीकल, स्त्री तथा प्रसुति, नाक, कान घाटी सम्बन्धि निशुल्क शिविर गर्न लागेको हो । शिविरमा निशुल्करुपमा रगत र पिसाबको जाच रिजनल हस्पिटलले गराउने कुरा आयोजकले बताएको छ ।
स्त्री तथा प्रसुति सम्वन्धि विशेषज्ञ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल प्रसुति विभाग तथा रिजनल हस्पिटलमा कार्यरत डा. तारा गुरुङ र डा. लक्ष्मी गुरुङ, बालरोग सम्वन्धि डा. यज्ञराज सिग्देल, मेडीकल सम्वन्धि मनोज कोईराला तथा रामकृष्ण गिरी, नाक÷कान÷घाटी सम्बन्धि डा. आकाशमान भण्डारी आउने कुरा शिविर संयोजक राजु गिरीले जानकारी दिए ।
रिजनल हस्पिटलबाट आउने सम्पूर्ण प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा रहेको कुरा रिजलन हस्पिटलका मेनेजर अर्जुन शर्माले बताए । शिविरका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वीकृत लिईसकिएको र आन्तरिक कामहरु पूरा भईसकेको कुरा क्लवका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसीले बताएका छन् । साथै उनले शिविरमा सहभागि भई लाभ उठाउनको लागि सम्पूर्णलाई अनुरोध गरेका छन् ।